Ciidmada Badda ee Mareykanka oo ka furay Isbitaal ay ka dhiseen Tuulada Ali Oune ee Dalka Jabuuti – Walaal24 Newss
February 14, 2019	1	By walaal24
Ciidamada Badda ee Maraykanka oo ka tirsan Ciidamada Nabadgalyada ee Naval Mobile 1, oo loo xilsaaray Howlgalka Wadajirka ah ee Geeska Afrika, ayaa ku wareejiyey cusbitaalka cusub ee Ali Oune Medial Hospital oo laga dhisay Tuulada Ali Oune ee Dalka Jabuuti ayaa xariga looga jaray xarunta caafimaadka Jan. 31.
Xarunta baaxadeeda la’eg 2,900 square-foot, oo dhismayaal ay ku qaadatay dhismaheeda shan bilood, waxaa loogu talagalay in lagu hormariyo Wasaaradda Caafimaadka si ay u bixiso awooda aasaasiga ah ee caafimaadka, dhalashada iyo daryeelka kadib Tuulada Ali Oune iyo in ka badan 1,000 qof ayaa deggan tuulada iyo derisna la’ah dad reer baadiya ah .
“Caafimaadka waa mid muhiim u ah maanta iyo mustaqbalka Tuulada Ali Oune ee dalka Jabuuti,” ayuu yiri Alexander Hamilton, oo ah wakiilka Maraykanka u fadhiya Jabuuti, isagoo hadal ka jeediyay furitaanka Isbitaalka. “Waad ku mahadsantihiin millatariga Maraykanka si loo helo arrintan.”
Jabuuti ayaa leh mid ka mid ah heerarka dhimashada hooyada ee ugu sarreeya waddamada Afrika, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay UNICEF. Sababaha ugu weyn ee dhimashada caruurta da’doodu ka yar tahay 5 sano waa kuwa dhalmada ka mid ah oo ay ka mid yihiin infekshinka, uurka, asphyxia, infekshannada neefsashada, shubanka, duumada iyo nafaqo-xumada.
Madaxa CJTF-HOA iyo Camp Lemonnier, Hogaamiye Dowlada Jabuuti, iyo hoggaamiyeyaasha dowladda Mareykanka ayaa ka soo qayb-galay xafladda.
Mashaariicda sida rugta caafimaadka dumarka maaha oo kaliya in ay yareyso heerarka dhimashada ee hooyooyinka iyo dhallaanka labadaba, laakiin sidoo kale waxay dhisi doonaan xiriirka bulshada.
“Dhalashada dhalashadu maaha wax fudud, iyo meesha ay taariikh ahaan dhalayaan halkan waa halis,” ayuu yiri Sargaaka Mariam Cherif, oo loo xilsaaray dhismayaasha NMCB 1 iyo mid ka mid ah haweenka kaliya ee Sailors ee ka shaqeynaya rugta caafimaadka ee sidoo kale buuxineysa doorka turjumaanka. “Waxay iga dhigantahay inaan ku faraxsanahay inaan sidan u sameeyo.”
Cali Oune oo ah soddon kiilomitir u jirta magaalada Jabuuti, waxaa kaliya oo laga heli karaa waddo yar, kaas oo ay jari karaan roobab, isla markaana waxaa lagu tiriyaa socodka caamka ah ee dhagaxyada waaweyn. Maaha wax aan caadi ahayn in la arko gawaarida la riixay ama kuwa naafada ah ee wadada. Tani waxay keentay caqabado dhinaca saadka ah oo loogu talagalay 34 dhismayaa oo ku noolaa goobta muddo shan bilood ah.
“Qaadashada qalabka halkan, iyo kulaylka, waa mid ka mid ah caqabadaha,” ayuu yiri Lt. Cmdr. Matthew Baird, oo faahfaahin ka bixiyay sarkaal masuul ah, NMCB 1. “dhismayaalka ayaa inkastoo ay sameeyeen wixii ay u baahnaayeen si ay ula qabsadaan dabeecad weyn iyo xawaaraha aan horay loo arag. Waan ku faraxsanahay shaqada ay qabteen halkan. In la ogaado in aan gaarsiino jiilalka soo socda oo aan siin karno bilow fiican dhalashada waa abaalmarinta shaqada oo dhan. ”
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee Dalka Nigeria
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo ka hadlay dhacdadii Dugsiga Tababarka Ciidanka ee Jeneraal Gordan
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS oo Baydhabo ka furay Madasha Arrimaha Bini’aadninimada Dalka
Wargeysyada Mareykanka oo ku soo waramaya in la dilay Hamza bin Laden
QM oo war bixin ka soo saartay xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Xeryaha Dhadhaab
Trump “Maxay dib ugu laaban la’yihiin dalalkooda, si ay uga caawiyaan dib u dhiska dowladahooda burbursan iyo…..
Daawo: Ra’iisul wasaare Khayre oo lagu soo dhaweeyay Waqooyiga Gaalkacayo iyo khudbadii uu ka jeediyay